5 Best Winter Destinations In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > 5 Best Winter Destinations In Europe
Europe ine vamwe chando nokunaka panguva inotonhora mwedzi kuti havana kufanana nzvimbo munyika. Pane zvakawanda zvakasiyana-siyana, uye hapana nzvimbo mbiri dzine chete kunzwa uye mhepo. Saizvozvo, Vanhu vazhinji vanoti kuti maguta maguta panguva chando mwedzi sokuti vachienda itsva rwendo. Winter ane tarenda anokwanisa kuchinja Europe chose, uye zvaita, gadzira chiitiko chitsva zvachose chevashanyi chavasingakwanise kusangana nacho chero imwe nguva yegore. The akawira chando kunounza yakawanda mabasa yechando uye mazororo zvakakosha kuti zvose mutambo chaizvo. Pasinei nokuwanda kuchinja uye runako, hazvibviri kushanyira zvose. Kana uchida kufamba kune mamwe dzakakurumbira mavara okufambisa, shanyira izvi 5 chando dzokugara mu Europe.
Rail senga ndiyo zvakatipoteredza ushamwari nzira yokufamba. Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel uye chakaitwa Save A Train The CHEAPEST Dzidzisai Tickets Website In The World.
1. Winter Destinations In Europe: Budapest, Hangari
Kana uri kutsvaka inoshamisa munguva yechando zvichaita katyamadza iwe, zvino tarisa mberi pane muBudapest. Ndiro guta wakakwana kuti chando uchapukunyuka. Chimwe chikuru zvikonzero kuti vakawanda vanosarudza Budapest inotengeka prices. Unofanira kuwana kuona akanaka mutaundi pamwero inokwanisika. Budapest Kazhinji izere vashanyi munguva yezhizha. zvisinei, munguva yechando, unokwanisa kuona guta racho runako shoma vazhinji. Kunze kuti, iwe unowana akawanda echimney makeke neinonaka waini.
Rimwezve bhonasi ndiyo dzinokatyamadza Margaret Island. Ndiyo nzvimbo yakakwana kuti kushanya kana uchida kuva paakaita snowball kurwisana. A yakawanda veko uye vashanyi kuungana neshamwari dzavo uye kunakidzwa chando. Kana snowball kurwa vasiri kwamuri, ipapo vanonakidzwa Skating pamberi Castle! Budapest City Park anova ice Skating Rink munguva yechando. Kamwe wapedza achiseka muchando, unogona kufamba kusvika dzokugezera. The zvinoshamisa Gellert Spa inzvimbo huru anodziya uye kunakidzwa nevamwe mvura chafariz.
2. Venice, Itari
Venice arege kuva wokutanga chinhu kuuya mupfungwa kana iwe kufungidzira dzechando European. zvisinei, kana iwe kuenda kuguta migero panguva yechando, ucharangarira zvachose. The yakatsvikinyidzana migwagwa uye cafes ruzha vari toned pasi, uye unoona kurutivi rweguta zhizha haagoni kuratidza. Zvose Chipatapata chiri mwedzi zhizha kutsiviwa wakadzikama uye kuti akakwana kuti chando remba akanyorova chadenga. zvisinei, zvinokosha kuona kuti guta anouya upenyu nokukurumidza apo Venice Carnival mabhanzi kumativi. ose February, guta awana sefungu Vashanyi, uye dzemaoresa Masiki kukangaidza mumigwagwa muguta. Creative zvokupfeka uye vachitamba mumigwagwa kuunza nhoroondo mavara guta kuti upenyu. Kana uchida munhu yainakidza yechando kuti haazombokanganwi, isa Venice pane zvaunonyora.
Turin kuna Venice Zvitima
Parma kuna Venice Zvitima
La Spezia kuna Venice Zvitima
3. Winter Destinations In Europe: Paris, Furanzi
France inobatanidza vanhu vakawanda vane zvinonaka chili uye kudanana mumamiriro. zvisinei, nyika inonyanya inofadza apo chando mabhanzi kumativi, kunyanya guru. Paris ari zvinoshamisa pasinei nguva ipi yegore iwe kuenda ikoko. Zvinosuruvarisa, kwete vanhu vakawanda vawane kuwana nayo panguva kutonhora mwaka. Paris, guta rudo uye rudo, zvirokwazvo vanofarira uye kusimbisa imi kana musingadi nezveimwe akapfeka inodziya bhachi nezvimwe chando mukonde. Mutambo Mwaka rinounza Paris kuupenyu. Visitors haagoni chete kuwana zvorudzi zvinonaka chikafu uye mitambo waini. zvisinei, ndiyo zvakare nguva yakakwana kuona zviitiko zvakafanana Mutambo Wonderful pana Musée of Arts Fairground uye Lights Festival ari huerto of Plantes.
Ongorora mumisika guta uye yakashongedzwa migwagwa, paunenge uchiwana kunaka kweguta. Winter ndiyo nguva hwakakwana kufamba achitevedza Seines mabhanga kana kurasika panzira Le Marais. Kamwe munoona kuti, unogona mifananidzo inokukurudzira kunyika Parisian Datenroku uye afarire mvura yakanaka. Wapedza, unogona kuona zvose huru zvinokwezva muParis misara vashoma.
4. Vienna, Ositiriya
Kunyange zvazvo zviuru zvevashanyi anodirana kuAustria gore rose, pane imwe fairytale aone munguva yechando. All maguta uye namaguta munyika ane enchanting vanofunga kuti rakanyatsojeka rakasiyana. Pane Kazhinji chinokosha rakanaya chando kubva November kusvika March. Izvi zvinoreva kuti vanoda chando havamboregi rumbidza yeAustria dzechando. Kana uchida kuona musimboti ane yeAustria chando, kushanya Vienna. guta rino grand inozivikanwa mweya wayo pamitambo uye mamirire mukonde. Kana muri manzwiro mamwe chando kunotenga, iva nechokwadi kushanyira Christmas misika. Vienna ane mamwe dzakakurumbira misika iri yose Europe. Vashanyi kuwana kunakidzwa inonaka yeAustria chili uye kunwa zvimwe mulled waini. Kunze kuti, pane siyana dzakaitwa nemaoko zvinhu uye zvinonaka chokoreti inobata.
5. Winter Destinations In Europe: Interlaken, Siwizarendi
Kana iwe uri munhu chiito isingagoni kufungidzira nguva muguta muchando zororo, ndokubva Interlaken muSwitzerland ndiye chando rwendo kwamuri. Kusiyana dzakakurumbira, guru dzakasiyana guta, Interlaken ndiye yokuzororera guta pedyo Alps. Zviuru skiers uye snowboarders kuti pavaienda Interlaken yechando ose uye kuti vashandise incredible nzvimbo yacho inopiwa. Interlaken ane yakanakisisa zvose nyika. Chekutanga, napedyo uye zvakakunakira kuwana mabasa gomo zvinoshamisa. chepiri, rinopa zvose mumwe aigona kuda kana totaura zvivako. Ungave vanonakidzwa chiedza mafaro, kana uchida kuidza miganhu yako pamakwara akanyanyisa, Interlaken ndechenyu. Chero pfungwa dzako mafaro ndiwo, uchafara kuziva kuti unogona kuita nzira yako muguta uye vanakidzwe zvimwe fondue.
Europe ine chinhu vose. Zviri kwauri kusarudza chii chando wako inoshamisa nezviso zvakafanana uye kushandisa Save A Train kuti ikoko. Pane zvakawanda zvekusangana nazvo mumwedzi yechando, saka tora mukana uye tora danho rakashinga kumberi.
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Winter Destinations In Europe” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-destinations-europe%2F%3Flang%3Dsn – (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
europetravel trainjourney chitima mazano travelaustria travelfrance travelitaly travelswitzerland winterdestination winterdestinations kufamba kwechando
5 Zvikonzero kuchovha Night Zvitima In Europe
Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe